Seranam-piaramanidina ivato : Mety hampiasa fiara mifono vy ny mpitandro filaminana
Hampiasa ny fitaovana rehetra eo am-pelantanany ny mpitandro ny filaminana anio eny Ivato, toy ny fiara mifono vy.
Tsy hitsitsy ihany koa izy ireo raha misy ny manararaotra amin’ny asa ratsy, toy ny fandrobana fananan’olona na teratany na vahiny.
« Mikasika ny za-hitranga eny Ivato dia tsy azo hidirana mihitsy eo amin’ny toerana fijanonan’ny fiara ivelan’ny seranam-piaramanidina rahampitso (mantsy ny anio). Efa manomana ny fiara mifono vy, hatramin’ny fiaran’ny mpamonjy voina dia efa vonona daholo hiatrehana izay mety ho fihoaram-pefy eny Ivato. Ankoatra ireo mpitandro ny filaminana natokana hisambotra dia hisy ihany koa ireo izay hitandro ny filaminana manerana an’Ivato », hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, kaomandin’ny fari-piadidiam-paritry ny Zandarimaria Antananarivo.
Ankoatra izay dia nilaza ihany koa ity tompon’andraikitra ity fa tsy ho eny Ivato avokoa ny mpitandro ny filaminana rehetra. Hisy ihany koa ireo hameno ny renivohitra hanara-maso sao misy manararaotra handroba tranombarotra na teratany na vahiny. « Mikasika ireo mpandroba dia manamafy izahay fa hitifitra avy hatrany mihitsy. Efa nomena ny baiko amin’izany ny mpitandro ny filaminana rehetra », hoy hatrany ity manamboninahitra ambony ity.
« Mikasika ny ho fisamborana indray dia nohamafisiny fa fampiharana didim-pitsarana no ataon’izy ireo. Tsy manana olana amin’ny Filoha teo aloha aho na sanatria tsy fitiavana. Didim-pitsarana nivoaka tsy maintsy tanterahina. Tsy marina ny filazana fa tsy mitombina ny fitsarana ny raharaha iray », hoy ihany jeneraly Ravalomanana Richard.
Madagascar: Le Ministère de la justice devrait accélérer les jugements des détenus.
Madagascar: 3% des travaux de réhabilitation des routes dans la capitale sont achevés.